Isikhathi esingakanani sokuthwebula kuze kube lapho imibhalo isamukelwe? | | IMIHLA NGE-DENMARK
Isikhathi esingakanani sokucubungula kuze kube yilapho imibhalo yamukelwe?
Ithimba le-Wedding Express
12. January 2019 28. January 2019
Umshado eDenmark, Umthetho omusha womshado eDenmark
Uma wonke amadokhumenti ziphelele kanye Formule niye nagcwaliswa kahle, ukuqashelwa kwemibhalo kanye embukisweni isithiyo isitifiketi somshado kuthatha cishe izinsuku 5 ukusebenza. Kwezinye izimo, isikhathi sokucubungula singathatha isikhathi eside uma, ngokwesibonelo, amadokhumenti alahlekile noma alahlekile.
Sisebenza neziphathimandla zaseDenmark futhi sikhuluma isiDanishi, ngakho singasheshisa isikhathi sokucubungula.
processing time, amadokhumenti
2 Iphendula ngokuthi "Sinesikhathi esingakanani isikhathi sokucubungula kuze kuvunyelwe amadokhumenti?"
Simone Sanchez uthi:
Januwari 28, 2019 ku-10: 39 pm
Kumele sihambise nini imibhalo uma sifuna ukushada ngaphambi kwePhasika?
Ithimba le-Wedding Express uthi:
Januwari 28, 2019 ku-16: 08 pm
Sawubona uMnu. Sanchez,
Uma ungathanda ukuba umshado wakho ushibhile ngangokunokwenzeka, sicela usithumelele amadokhumenti akho ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze umshado usengabhekwa njengomshado ojwayelekile. Ngizokubona maduzane.
Ingabe izitifiketi ze-solvency zidingeka?
Yimiphi imibhalo idinga i-apostille?
Sawubona othandekayo wedding imibhangqwana!
Ingabe kusengenzeka ukushada eDenmark?
Ithimba le-Wedding Express at Isikhathi esingakanani sokucubungula kuze kube yilapho imibhalo yamukelwe?
Simone Sanchez at Isikhathi esingakanani sokucubungula kuze kube yilapho imibhalo yamukelwe?
UFelik Bauer at Sawubona othandekayo wedding imibhangqwana!
Umthetho omusha womshado eDenmark